Tajaajilli ambulaansii akeeka yaadameef haa oolu
Tajaajilli ambulaansii akeeka yaadameef haa oolu Featured
Tajaajila wal'aansa fayyaa qulqullina qabuufi saffisaa argachuun du’aatii haadholiifi daa’immanii gadi buusuuf kan gargaaru yoo ta’u, rakkoo gama kanaan jiru furuun fayyadamtummaa lammiilee mirkaneessuuf ambulaansii aanaalee maraaf arjoomameera.
Kun ta’us ambulaansiiwwan hudhaalee haadholiifi daa’immanii akka furaniif akeekaman hojii seeraan alaarratti bobba'unn ergama kennameef bahachaa akka hinjirre hubatama.
Sosochii wal'aansa fayyaa qulqullina qabu qabatamaan lafa qabsiisuu keessatti gorsa ogeeyyiidhaan kennamuun olitti kenniinsa tajaajilaa si'aayinaafi qulquliina qabu isa ijoo yoo ta’u, ambulaansiiwwan ergama kennameefiin ala socho'an ni mul'atu.
Konfiraansii 19fa Ministeerri Eegumsa Fayyaa Federaalaa qaamota dhimmisaa ilaallatu waliin tibbana Magaalaa Gondaritti gaggeesserratti yaadawwan kallattiilee gara garaa ka’aa tureen tajaajilli ambulaansonni tokko tokko kennaa jiran rakkoo hawaasaa kan hingiddugaleeffanneefi seeraan ala.
Ministirri Eegumsa Fayyaa Federaalaa Piroofeesar Yifruu Birihaan gamasaaniin dubbii dubbataniin, Itoophiyaa keessatti ittifayyadamni ambulaansii hubannoo argachaa hinjiru.
Du’aatiin haadholiifi daa’immanii akka hir’atuuf yaadamee ambulaansiin kennamuu kan himan ministeerichi, idoowwan gara garaatti aanga'oonni tokko tokko tajaajila geejjiba dhuunfaa godhatanii jiru jedhu.
Kana malees ambulaansonni hedduun konkolaattota daldalaa waliin hiriira galanii tajaajila geejjibaa laachaa jiraachuus eeranii, kunammoo paakeejii fayyaa lafa qabsiisuuf aggaamame kan gufachiisu waan ta’eef gocha akkanaarraa of qusachuun barbaachisaadha jedhu.
Osoo haadholiin ciniinsuudhaan qabamanii watwaataa jiranii aanga'oonni ofiif bulan of jaalachuu isaaniitiin du’aatii haadholiifi daa’imman irratti qaqqabaa jiruuf sababa ta’aa jiru kan jedhan Piroofeesar Yifruun, gochi balaafamaa kana dhabamsiisuuf qabsoon lammiilee hundaa murteessaa ta’uu dubbatu.
Gochi gama kanaan muuxaneeffame hatattamaan cabuu qaba jedhanii, ija jabummaan kallattii kanaan dalagamu sassaabdummaa kiraa hamaa waan ta’eef of ilaalaa deemuun barbaachisaa ta'uu himu.
Rakkoo dhiyeessii ambulaansii waliin walqabatee bakkeewwan gara garaatti ka’aa jiru furuuf bittaan ambulaansii kuma sadii ol raawwatamuus himanii, isaan keessaa 300 ol biyya keessa galuusaanii ibsu.
Ambulaansiiwwan bitamanii biyya keessa galan kunneen tajaajila aanga’ootaatiif akka oolaniif osoo hintaane ergama paakeejiin fayyaa qabatee ka’e milkeessuuf waan ta’eef xiyyeeffannoo itti laachuun dirqama lammii hundaati.
Kun ta’us aangoo ofii dahoo godhachuun ambulaansii lubbuu deessuufi daa'ammanii baraaruuf ramadame tajaajila dhuunfaaf oolfachuun hawaasa yakkaafi gara jabummaa ta'uun hubatamuu qaba jedhu, ministirichi.
Ministir de'eetaan Ministeera Eegumsa Fayyaa, Doktar Amiir Amaan gamasaaniin akka jedhanitti, godinaaleefi aanaaleetti hooggantootni maal nadhibdeen ambulaansii tajaajila dhunfaaf oolchan gocha gara jabeenyaa kanarraa of qisachuu akka qaban hubachiisu.
Konkolaachistoonnis kallattii mataasaaniin madda galiin itti sassaabamu godhachuun gara jabeenya ta'uu hubachuu qabu jedhaniiru.
Dhimmi ambulaansii wajjin walqabatee ka’u dhimma jiraachuufi jiraachuu dhabuuti kan jedhan ministir de'eetichi, ergama ambulaansiif kennameen alatti sosochiin qaxxaamuraa taasifamu kamuu yakka lubbuu haadholiifi daa'immaniirratti raawwtamuudha jechuun ibsu.
Kana malees kaffaltiin seeraan alaa haadholii wal'aansa barbaadanirraa karaa konkolaachisaa sassaabamaa jiru irra gahamuu kan himan Doktar Amiir, gama kanaanis akeekkachaa deemuun dirqama konkolaachisaati jedhu.
Iddoo waamamanitti si'aayinaan argamuurrattis sababoota adda addaatiin walqabatee hanqinni jiraachuu eeranii, keessumaa rakkoolee daandii wajjin walqabatee uumamu furuuf qaamolee dhimmi ilaallatu wajjin mariyachuun akka barbaachisus ni himu.
Walumaagalatti paakeejii eegumsa fayyaa fiixaan baasuun fayyadamtummaa haadholiifi daa’immanii qabatamaan mirkaneessuurra darbee dhimma jiraachuufi jiraachuu dhabuu ta'uun hubatamee kenniinsa tajaajila ambulaansii si'eessuufi waan yaadameef oolchuun barbaachisaadha.
Torban kana/This_Week 43573
Guyyaa mara/All_Days 1468353